Ny kinova Bash 5.0 vaovao dia tonga miaraka amina endrika vaovao | Avy amin'ny Linux
Ny kinova Bash 5.0 vaovao dia tonga miaraka amina endrika vaovao
Bash (Bourne-indray akorandriaka) dia mpandika teny amin'ny karazana baiko. Izany dia ny akorany Unix izay ao anatin'ny tetik'asa GNU mifototra amin'ny akorandriaka Bourne (bsh na sh tsotra fotsiny amin'ny kinovan'ny UNIX maro).
Bash mitondra fanatsarana maro, ao anatin'izany ny akorandriaka Korn (ksh) sy ny akorany C (csh). Bash dia rindrambaiko maimaimpoana navoaka tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana GPL.
Ity no mpandika teny default amin'ny rafitra Unix maimaim-poana, indrindra fa ny rafitra GNU / Linux. Izy io koa no akorandriaka tsy misy fakan'ny Mac OS X. Ny tetik'asa Cygwin no nitondra azy voalohany tany Windows ary amin'ny Windows 10 dia safidin'ny rafitra miasa izany.
Bash dia fampiharana feno ny famaritana akorandriaka POSIX, saingy miaraka amina fanitsiana ny tsipika komandy mifehy sy ny fanaraha-maso ny asa amin'ny arkitolo izay manohana azy, ny asan'ny csh, ary ny endri-javatra maro hafa.
1 Boky vaovao an'ny Bash
1.1 Vaovao lehibe
1.2 Fiovana hafa
2 Ahoana ny fomba hahazoana Bash 5.0 amin'ny Linux?
Boky vaovao an'ny Bash
Andro vitsy lasa izay, ny ekipa miadidy ny fampandrosoana Bash dia nanao fanambarana ny amin'ny fisian'ny fanokafana ampahibemaso voalohany an'ny Bash 5.0, ny kinova lehibe fahadimy amin'ny akorany Unix avy amin'ny tetikasa GNU.
Ity kinova ity manamboatra bibikely lehibe marobe ao amin'ny bash-4.4 ary mampiditra fiasa vaovao maromaro.
Tao amin'ny hafatra iray avy amin'ny lisitra fandefasana mailaka GNU Project, Chet Ramey, ny mpihazona Bash dia manazava fa ny manamboatra bug indrindra dia ny fanitsiana ny famahana ny laharana nameref ary andian-bibikely be dia be hita tamin'ny alàlan'ny famoahana.
Ireo fiasa vaovao malaza indrindra ampidiro miovaova karazana akorandriaka maro hafa toy ny BASH_ARGV0, EPOCHSECONDS, ary EPOCHREALTIME.
Ny roa farany dia mitovy amin'ny fahazoana ny isa segondra satria Epoch Unix (Epoch Unix), ny hany maha samy hafa azy dia ny EPOCHREALTIME dia teboka mitsingevana miaraka amin'ny mikraobaondrazy be fatrany.
Mariho fa ny vanim-potoana dia maneho ny daty voalohany anaovan'ny rafitra miasa fandrefesana ny ora.
Misy fisie config-top.h vao voafaritra ao amin'ny Bash 5.0, izay mamela ny akorany hampiasa sanda statika amin'ny $ PATH.
Ity kinova vaovao an'ny Bash 5.0 ity manana safidy akorandriaka vaovao koa izy io izay afaka mamela sy manafoana ny fandefasana lozisialy syslog amin'ny fotoana fohy.
Ho fampahalalana, syslog dia protokol iray izay mamaritra ny serivisy fandraketana hetsika ho an'ny rafitry ny solosaina. Izy io koa dia manondro ny anaran'ny endrika mamela ireo fifanakalozana ireo.
Entre fanovana lehibe hafa amin'ity Bash 5.0 vaovao ity dia mamoaka ny safidy globascirange dia alefa banga, fa azo kilemaina amin'ny alàlan'ny default amin'ny fotoana fanamboarana.
Ny maody POSIX dia afaka mamela ny safidy izao shift_verbose ary ny safidin'ny tantara namboarina tao amin'ny Bash 5.0 izay azonao atao izao ny manala ny elanelan'ny fidirana amin'ny tantara ampiasaina - d fanombohana.
Misy fiovana tsy mifanaraka amin'ny bash-4.4 sy bash-5.0. Araka ny voalazan'i Chet Ramey, ny fanovana ny fomba famahana ny variana nameref dia midika fa tsy hitondra fihetsika hafa ny fampiasan'ny nameref sasany, na dia nanandrana nanamaivana ny olana momba ny fifanarahana aza izy ireo.
Raha tsorina Bash 5.0 dia misy fanamboarana maromaro raha ampitahaina amin'ny Bash 4.4, fa koa misy fampiasa vaovao sy fanatsarana vaovao hanaraka tsara kokoa ny famaritana POSIX. Raha mila fampahalalana feno momba ny bash 5.0, azonao atao ny manondro ireo naoty navoakany tamin'ny fomba ofisialy.
Ireo fiasa sy fanatsarana vaovao ireo dia mamela an'i Bash ho matotra kokoa noho ny efa nisy.
Aza adino fa ny lisitra akorany dia nitarina niaraka tamin'ny PowerShell Core, fanontana loharanom-baovao misokatra an'ny PowerShell izay mandeha amin'ny Linux, macOS, ary Windows.
Ity tetikasa ity dia eo am-pivoarana tanteraka, saingy azontsika antenaina fa hitombo haingana izy io, satria manome ny tohiny i Microsoft hanokatra loharano "farafaharatsiny izao."
Ahoana ny fomba hahazoana Bash 5.0 amin'ny Linux?
Amin'izao fotoana izao Mijanona fotsiny ny miandry ny fampidirana an'ity kinova Bash vaovao ity ao anatin'ny tahiry fizarana Linux, satria io no safidy tsara indrindra.
Raha te hahafantatra bebe kokoa ianao sy ireo izay te hahazo an'ity kinova vaovao ity izao, azonao atao ny mitsidika ny rohy manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ny kinova Bash 5.0 vaovao dia tonga miaraka amina endrika vaovao
Efa navoaka ny kinova Metasploit Framework 5.0
Ny motera fikarohana DuckDuckGo dia voampanga ho mpampiasa mpampiasa